३३ किलो सुनकाण्डको थप अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि स्थगित
२०७५ श्रावण २ बुधबार, काठमाडौं । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिको कामप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टिपछि थप अनुसन्धान रोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि समिति उक्त प्रकरणको थप अनुसन्धानका लागि अन्य व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा अहिलेसम्म गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेको छ । ... बाँकी अंश»
भारतले भन्यो –गण्डकीमा पानीजहाज चलाउ
२०७५ श्रावण १ मंगलबार, काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको महत्वाकांक्षी पानीजहाज परियोजनालाई साकार बनाउन भारतले गण्डकी नदीलाई प्राथमिकता दिएको छ । कोशीको तुलनामा गण्डकी उपयुक्त हुने भारतको ठहर छ । ... बाँकी अंश»
केन्द्रीकृत मानसिकताः केन्द्रमै बढी कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी निर्धारण
२०७५ श्रावण १ मंगलबार, काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले केन्द्रमै ४५ हजार कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ । ... बाँकी अंश»
इतिहासमै पहिलो पटक अन्तिम दिन ३३ अर्ब भुक्तानी
२०७५ श्रावण १ मंगलबार, काठमाडौं । वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेर विनियोजित बजेट रित्याउने सरकारी कार्यालयहरुको पुरानो शैलीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ असार ३२ सोमबार, दमक । झापाको गौरादह ४ का वार्ड सचिव अर्जुन चापागाई कार्यालयमा एक्लै काम गर्छन्। फाइल मिलाउने, योजनाको सिफारिस दिने, भुक्तानी दिने, छाप लगाउने, वार्ड अध्यक्षलाई सही गराउने, दर्ता चलानी गर्नेसम्मको सबै जिम्मा उनकै हो। आइतबार बिहानैदेखि उनलाई भ्याइनभ्याइ थियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने दिनमा बिहानैदेखि लाभग्राही लाइनमा थिए। अस्तव्यस्त बनेको कार्यालयको उनको कामलाई जनप्रतिनिधी बसेरै सघाइरहेका थिए। ... बाँकी अंश»
फास्ट ट्रयाक – चर्चा धेरै, काम थोरै
२०७५ असार ३२ सोमबार, दिपायल । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेटमा धनगढी (हसनपुर)–खुटिया–बिपीनगर–दिपायल फास्ट ट्र्याक सडकमा सुरूङ निर्माण गर्ने योजना पर्यो, जसलाई स्थानीयले भने पत्याएका छैनन् । ... बाँकी अंश»
त्रिविले खोज्यो ५२ निकायको सम्पत्ति
२०७५ असार ३१ आइतबार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका ५२ निकायको जमिनको विवरण खोजेको छ । त्रिविद्वारा गठित त्रिवि सम्पत्ति संकलन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले भौतिक सम्पत्ति खोजी गरेको हो । ... बाँकी अंश»
लेन मिच्ने चालकलाई घरमै आउँछ फोन
२०७५ असार २९ शुक्रबार, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी दुर्घटना कम गर्न र सवारी चालकलाई अनुशासित बनाउन भन्दै उपत्यकामा लेन अनुशासनको पालनामा कडाइ गरेको छ । ... बाँकी अंश»
धरहरा पुनर्निर्माण चलखेलमा अड्कियो
२०७५ असार २७ बुधबार, काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि थालिएको टेन्डर प्रक्रिया ठेकेदार कम्पनीको चलखेलमा अड्केको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मंगलबार टेन्डरको टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, ठेकेदारको चलखेलका कारण सात दिन म्याद थप गरिएपछि धरहरा पुनर्निर्माण पछाडि धकेलिएको हो। ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २६ मंगलबार, काठमाडौं । लामो समयदेखि नेकपा एमालेकै मुख पत्रका रुपमा चर्चामा रहेको दृष्टिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिरुद्धमा समाचार लेख्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवलय बिरुद्ध सो पत्रिका खनिएको छ । ... बाँकी अंश»
चालु खर्चमा ब्रह्मलुट, एकै दिन १० अर्ब भुक्तानी
२०७५ असार २५ सोमबार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालु बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालु बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ। ... बाँकी अंश»
संचालकले मन्त्री भेटेपछि चलखेल तीव्र, नर्सिङ शिक्षामा शुल्क बृद्धी
२०७५ असार २५ सोमबार, काठमाडौं । निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाको दवावमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नर्सिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धी गर्ने तयारी गरेका छन् । नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने संस्थाले भर्ना खोलिसकेको अवस्थामा मन्त्री पोखरेलले शुल्क वृद्धी गर्ने तयारी गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
२५ न्यायाधीशलाई जरिवाना, नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ?
२०७५ असार २४ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गरे । ... बाँकी अंश»
एक किशोरी छाउगोठबाटै बलात्कृत
२०७५ असार २१ बिहिबार, सुर्खेत । महिनाबारी भएर घरदेखि टाढाको छाउगोठमा सुतिरहेकी एक किशोरी सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी छिन् । पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीलाई स्थानीय तीन किशोरले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
डा केसीलाई ओली सरकारले हेप्यो, कर्णाली प्रदेश सरकारको समर्थन
२०७५ असार १८ सोमबार, काठमाडौं । डा गोविन्द केसी अनसन बसेको दोस्रो दिन वितीसक्दा पनि सरकार टसमस भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारीत गरिनुपर्ने माग गर्दै डा केसी शनिबारदेखि जुम्लामा अनसन बसेका छन् । ... बाँकी अंश»
ओली र प्रचण्ड शक्तिशाली बन्ने होड, छुट्टा छुट्टै गुप्तचर संयन्त्र खडा
२०७५ असार १७ आइतबार, काठमाडौं ।नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' वीच शक्ति पृथकिकरणमा सुरु देखिनै देखिएको विवाद सतहमा आएको छ । ... बाँकी अंश»
धान दिवसको औचित्यः १० महिनामा २४ अर्बको चामल आयात
२०७५ असार १५ शुक्रबार, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको १५ वर्ष भयो। हरेक वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि धान उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ। ... बाँकी अंश»
ठेकेदारमाथि कारबाही मामिलामा मन्त्री विभाजित, आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै सरकार
२०७५ असार १४ बिहिबार, काठमाडौं । दुई मन्त्रीबीच विवादका कारण समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। ... बाँकी अंश»
राष्ट्रपतिको शिष्टाचार नीति ‘परिवर्तन’ भएको हो ?
२०७५ असार १४ बिहिबार, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको शिष्टाचार नीति परिवर्तन भएको हो ? यो प्रश्न राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका सांसदहरुको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका सांसदहरुका अनुसार शिष्टाचारका लागि राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा नमस्कार गर्ने गरेकी छन्। ... बाँकी अंश»
‘ग्याङ फाइट’ गुप्तचर अधिकृतबीच
२०७५ असार १३ बुधबार, काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित रोयल साइनो रेस्टुँरामा आइतबार साँझ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का अधिकृतहरुबीच ‘ग्याङ फाइट’ भएको छ । दुई समूहमा विभाजित अधिकृतहरुबीच मुक्का प्रहार र हात हालाहाल समेत भएको थियो । ... बाँकी अंश»